စည်းကမ်းချက်များ & အခြေအနေများ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုဤ website ၏သင့်အသုံးပြုမှုကိုအုပ်ချုပ်; ဒီ website ကို အသုံးပြု. , သငျသညျအပြည့်အဝတွင်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံပါ။ သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုသို့မဟုတ်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသဘောမတူခဲ့လျှင်, သင်သည်ဤ website ကိုမသုံးရပါမည်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က cookies များကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပြီးဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသဘောတူခြင်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ privacy နဲ့ cookies ပေါ်လစီများအရ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုသဘောတူတယ်။
ဤ website ၏စာမကျြနှာတှငျပါရှိသောအကြောင်းအရာသာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီ website တွင်မဆိုအကြောင်းအရာကိုမဆိုသုံးစွဲခြင်းလုံးဝအရာအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ် www.yourbrainonporn.com နှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်တွေထိုက်မဖြစ်ရကြမည်။ ဒါဟာမဆိုဤ website ၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်း, သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ website / s ကိုတွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာအပေါ်မှီခိုအားထား, သင့်တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
သငျသညျကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဆိုလမ်းအတွက်ဤ website ကိုမသုံးရပါမည်, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်, ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ရရှိမှုသို့မဟုတ်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းပျက်စီးမှု; သို့မဟုတျ, ဥပဒေမဲ့တရားမဝင်, လိမ်လည်လှည်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသော, ဒါမှမဟုတ်မဆို, ဥပဒေမဲ့တရားမဝင်, လိမ်လည်လှည်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်. ဖြစ်သောမည်သည့်လမ်းဖြစ်သည်။
သင်သည်မည်သည့် spyware, ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, Trojan horse, worm ကို, keystroke logger, Rootkit သို့မဟုတ်အခြား, စတိုးဆိုင်, ကော်ပီကူးရန်ဤ website ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်အိမ်ရှင်, transmit, စေလွှတ်မည်, အသုံးပြုခြင်း, ပါဝင်ပါသည် (သို့မဟုတ်ဆက်စပ်နေသည်) အရာမဆိုပစ္စည်းထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးမနေရပါ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ။
သငျသညျမရှိဘဲဤ website ကို ဆက်စပ်. ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အတွက် (ကန့်သတ်ခြစ်, ဒေတာသတ္တုတူးဖော်ရေး, ဒေတာထုတ်ယူမှုနှင့်ဒေတာများရိတ်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲအပါအဝင်) မည်သည့်စနစ်တကျသို့မဟုတ် automated ဒေတာစုဆောင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်မပြုရ www.yourbrainonporn.com'' s ကိုရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ဖော်ပြ။
[သငျမလိုလားသောစီးပွားဖြစ်ဆက်သွယ်ရေး transmit သို့မဟုတ်ပေးပို့ဖို့ဒီ website ကိုမသုံးရပါမည်။ ]
သငျသညျမရှိဘဲစျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဤ website ကိုမသုံးရပါမည် www.yourbrainonporn.com'' s ကိုရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ဖော်ပြ။
သငျသညျ www.yourbrainonporn.com သင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းကြောင်းကိုဤ website မှ link တစ်ခု၏ဖျက်မှုကိုတောင်းဆိုသင့်ပါတယ်, သင်ချက်ချင်း link ကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်, အဲဒီသဘောတူသည်။
သင်သည်ဤ website တွင်ပါဝင်သည်ကြောင်းကိုသင်၏က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု link ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် www.yourbrainonporn.com လိုလျှင်ဆက်သွယ်ပါ www.yourbrainonporn.com ဒီ site ပေါ်ရှိ "ဆက်သွယ်ပါ" အင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျဖယ်ရှားရေးတောင်းဆိုဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးရှိသည်မဟုတ်လျှင်, ထိုကဲ့သို့သောဖယ်ရှားရေးမှာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက် www.yourbrainonporn.com ရဲ့ သမ္မာသတိ။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုမှာတော့ "သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ" သင်ဘာပဲရည်ရွယ်ချက်, ဒီ website ကိုမှတင်သွင်းကြောင်း (ကန့်သတ်စာသား, ပုံများ, အသံပစ္စည်း, ဗီဒီယိုပစ္စည်းနဲ့ audio-အမြင်အာရုံပစ္စည်းမပါဘဲအပါအဝင်) ပစ္စည်းကိုဆိုလိုသည်။
အသုံးပြုရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်၊ ထုတ်ဝေရန်၊ ထုတ်ဝေရန်၊ ဘာသာပြန်ရန်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်အတွက်အသုံးပြုရန်အကြောင်းအရာများကိုကမ္ဘာအနှံ့၊ ပြန်လည်ကုန်ကျ။ မရသော၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်အား www.yourbrainonporn.com အားသင်အားပေးသည်။ www.yourbrainonporn.com အားဤအခွင့်အရေးများကိုလိုင်စင်ချထားပေးပိုင်ခွင့်နှင့်ထိုအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်သည့်အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အရေးကိုလည်းသင်အားပေးသည်။
သင်၏အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာသည်တရားမ ၀ င်၊ တရားမ ၀ င်သော၊ မည်သည့်တတိယပါတီ၏ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုမဆိုချိုးဖောက်ခြင်းမပြုသင့်ပါ။ သင့်အားလည်းကောင်း၊ ဥပဒေ)
Www.yourbrainonporn.com ဤ website မှတင်သွင်းမဆိုပစ္စည်းတည်းဖြတ်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သို့မဟုတ်၎င်း၏ server များပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထား, ဒါမှမဟုတ်တည်ခင်းဧည်သို့မဟုတ်ဤ website ကိုအပေါ်သို့ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင် www.yourbrainonporn.com အခွင့်အရေးသို့ရာတွင် www.yourbrainonporn.com တို့အားဤသို့သောအကြောင်းအရာ၏လကျအောကျခံ, သို့မဟုတ်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာထုတ်ဝေရန်စောင့်ကြည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရန်မထားဘူး။
တိုင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုသည်ဤ website တွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာများတိကျသေချာစေရန်လုပ်နေစဉ်, ဒီ website ကိုအမြန်သို့မဟုတ်အဓိပ်ပာဆိုကိုယ်စားသို့မဟုတ်အာမခံခြင်းမရှိဘဲ "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Www.yourbrainonporn.com ဤ website သို့မဟုတ်ဤ website တွင်ပေးထားသောအချက်အလက်များနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းမကိုယ်စားသို့မဟုတ်အာမခံစေသည်။
အထက်ပါအပိုဒ်၏အစဉ်အဆက်မှစိတ်စွန်းကွက်ခြင်းမရှိဘဲ, www.yourbrainonporn.com အကြောင်းခိုင်လုံပါဘူး:
ဤ website မှာအားလုံးအဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်ပါ, သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် သို့မဟုတ်
ဒီ website တွင်သတင်းအချက်အလက်, ပြည့်စုံခြင်းသည်ဟုတ်မှန်, တိကျမှုသို့မဟုတ် Non-အထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ website တွင်အဘယ်အရာကိုမျှဥပဒေ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်မျိုးအကြံဉာဏ်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ရည်ရွယ်သည်။ သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်ကိုလိုအပ်ခဲ့လျှင်သင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
သင်ဤ website ၏အကြောင်းအရာတိသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများဆံ့နှင့် www.yourbrainonporn စခွေငျးငှါဖော်ပြပညတ်တရားအားဖြင့်ခွင့်ပြုညျ့အဝအတိုင်းအတာအထိမည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောတိသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများများအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုချန်လှပ်ကြောင်းဝန်ခံ။
ပြင်ပအင်တာနက်ဆိုက်များဤ website / s နဲ့ link ကိုထို့ပြင်အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောရန်သူတို့အားအခြားသောပြင်ပအင်တာနက်ဆိုက်များများ၏အရည်အသွေး, ကြံ့ခိုင်မှုသို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် ပတ်သက်. မပါအာမခံသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုစေသည်။ ပြင်ပအင်တာနက်ဆိုက်များဝင်ရောက်ဖို့သူတို့အားလင့်များသုံးပြီး၌သင်တို့ကိုသူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များ၏ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ မည်သည့်ပြင်ပလင့်များသို့မဟုတ်မြို့သားပါရှိသောအကြောင်းအရာများအပေါ်မှီခိုမဆိုသုံးစွဲခြင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Www.yourbrainonporn.com ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်. မဟုတ်ရင်၏အကြောင်းအရာများကို, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. (အဆက်အသွယ်၏ပညတ်တရားအောက်၌ရှိမရှိတရားမျှတမှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်၏တရား) သင်ခံထိုက်ပေ၏ဖြစ်, သို့မဟုတ်မည်မဟုတ်:
မဆို, သွယ်ဝိုက်အထူးသို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဆုံးရှုံးမှုများအတွက်; သို့မဟုတ်
မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးမှု, ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု, ဝင်ငွေ, အမြတ်အစွန်းသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ငွေစု, ကန်ထရိုက်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေး၏ဆုံးရှုံးမှု, ဂုဏ်သတင်းသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရေးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အချက်အလက်များ၏ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည်။
တာဝန်ယူမှုကိုဤကန့်သတ် www.yourbrainonporn.com ဖော်ပြအလားအလာဆုံးရှုံးမှုအကြံပြုထားသည်လျှင်ပင်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဤဆိုဒ်မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ထဲမှာဘယ်အရာကမှကထုတ်ပယ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရန်မှဥပဒေမဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပညတ်တရားအားဖြင့်အဓိပ်ပာမဆိုအာမခံထုတ်ပယ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရန်တော်မူမည် နှင့်ဤ website ကိုမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အတွက်ဘာမျှမဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း www.yourbrainonporn.com ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုဖယ်ထုတ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်:
သေခြင်းတရားသို့မဟုတ် yourbrainonporn.com ရဲ့ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာ;
yourbrainonporn.com ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုမှားယွင်းစွာတင်ပြ; သို့မဟုတ်
ကိစ္စ yourbrainonporn.com ထုတ်ပယ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယင်း၏တာဝန်ယူမှု, ဖယ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသို့မဟုတ်ဆီကမှရန်ကတရားမဝင်သို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောပါလိမ့်မယ်အရာ။
ဒီ website ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဤ website ကိုမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ထွက် set တာဝန်ယူမှုများချန်လှပ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ သင်သည်သူတို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှိပါသည်ထင်မထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်ဤ website ကိုမသုံးရပါမည်။
သငျသညျ www.yourbrainonporn.com ယင်း၏်ထမ်းများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်တစ်ခုအကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းလက်ခံပါ။ သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဆက်စပ်. ခံရမဆိုဆုံးရှုံးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း www.yourbrainonporn.com ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များဆန့်ကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမဆိုပြောဆိုချက်ကိုမရောက်စေကြောင်းသဘောတူသည်။
အထက်ပါအပိုဒ်ဖို့လိုမုန်းထားခြင်းမရှိဘဲ, သင်သည်ဤ website ကိုမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်ထွက် set အာမခံနှင့်တာဝန်ယူမှုများကန့်သတ်မှု www.yourbrainonporn.com ရဲ့အရာရှိများ, ဝန်ထမ်းများ, အေးဂျင့်များ, ခွဲများ, ဆက်ခံ, assign နဲ့ခွဲကန်ထရိုက်တာများအဖြစ် www.yourbrainonporn ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်ဟုသဘောတူ .com ။
သငျသညျဤဥပဒေဥပဒေရေးရာကုန်ကျစရိတ်နှင့်တတိယပါတီမှ www.yourbrainonporn.com အားဖြင့်ပေးဆောင်မည်သည့်ပမာဏသာ limitation မရှိဘဲအပါအဝင် (www.yourbrainonporn.com indemnify နှင့်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ကုန်ကျစရိတ်, liabilities နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ဆန့်ကျင် indemnified www.yourbrainonporn.com စောင့်ရှောက်ရန်ဆောင်ရွက်ရန် www.yourbrainonporn.com ရဲ့ဥပဒေရေးရာအကြံပေး၏အကြံပေးချက်အပေါ်တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှု၏အခြေချ) www.yourbrainonporn.com ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုမဆိုပြဌာန်းချက်၏သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့မဆိုချိုးဖောက်ထဲကပေါ်ထွက်လာသော, ဒါမှမဟုတ်ဆိုပြောဆိုချက်ကိုထဲကပေါ်ထွက်လာသောမြှုတ်သို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရ သင်တို့သည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုပြဋ္ဌာန်းချက်ချိုးဖောက်ပါပြီ။
သင်သည်မည်သည့်လမ်းအတွက်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုချိုးဖောက်လျှင်ကြောင့်ပြိုပျက်ရာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သင့်လျော်သောယူဆအဖြစ်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင် www.yourbrainonporn.com ရဲ့အခြားအခွင့်အရေးများကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ, www.yourbrainonporn.com ထိုကဲ့သို့သောအရေးယူစေခြင်းငှါ, သင့် access ကိုဆိုင်းငံ့ထားရန်အပါအဝင် သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်ပိတ်ဆို့နှင့် / သို့မဟုတ်သင်တို့တဘက်၌တရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုမှုဆောင်ခဲ့တောင်းဆိုဖို့သင့်ရဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးဆက်သွယ်ခြင်း, ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ရှုခြင်းမှသင့် IP address ကို အသုံးပြု. ကွန်ပျူတာများကိုပိတ်ဆို့ခြင်း, ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ရှုခြင်းမှသင်ကတားမြစ်ခြင်း, က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်။
Www.yourbrainonporn.com သည်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုအခါအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများသည်ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများထုတ်ပြန်သည့် နေ့မှစ၍ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဒီစာမျက်နှာကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးသင်လက်ရှိဗားရှင်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိမည်။
Www.yourbrainonporn.com, လွှဲပြောင်းခွဲစာချုပ်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သင့်အားအကြောင်းကြားသို့မဟုတ်သင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူစရာမလိုဘဲဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင်၎င်း၏အခွင့်အရေးနှင့် / သို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်။
သင်, Sub-စာချုပ်လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင်သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနှင့် / သို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုပြဌာန်းချက်အားတရားရုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားအရည်အချင်းရှိသောအခွင့်အာဏာမှတရားမ ၀ င် / / အတည်မပြုနိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားပါကအခြားပြprovisions္ဌာန်းချက်များသည်ဆက်လက်သက်ရောက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖျက်သိမ်းပါကဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောအာဏာရှိသည့်ပြဌာန်းချက်တစ်ခုသည်တရား ၀ င်သို့မဟုတ်ပြenfor္ဌာန်းနိုင်လျှင်၎င်းအစိတ်အပိုင်းကိုဖျက်ပစ်သည်ဟုမှတ်ယူပြီးကျန်အပိုင်းကိုဆက်လက်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုဤ website ၏သင့်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သင်နှင့် www.yourbrainonporn.com အကြားတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်း, ဤ website ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုလေးစားမှုအားလုံးကိုယခင်သဘောတူညီချက်များကိုပယ်ဖျက်အစားထိုးသည်။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့်အော်ရီဂွန်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အညီလုပ်ကိုင်, ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်းဆိုအငြင်းပွားမှုများအော်ရီဂွန်ရဲ့တရားရုံးများ၏ non-သီးသန့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ပါလိမ့်မည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းမှာရရှိနိုင်မယ့် Contractology template ကိုထံမှအချို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုအသုံးပြုပြီးဖန်တီးခဲ့ http://www.contractology.com.
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်မိန်းကလေးများအားသင်အလွန်မြင့်မားသောအကြမ်းဖက်မှုကိုခံနေရသောသတင်းစကားကိုပေးသည်။ -Taina Bien-aim … t.co/vG0ShtID6L
လူမှုမီဒီယာအားလုံး၊ #porn, #gaming & # လောင်းကစား က်ဘ်ဆိုက်များအတူတူလုပ်နေတာနေကြသည်။ ကလေးများသည်အလွန်အမင်းအားနည်းချက်ရှိသည်။ The … t.co/Hh9CYMKyKW